Android - Androidsis ကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ပါ Androidsis (စာမျက်နှာ ၂)
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏နောက်ခံများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် Play Store တွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်များအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
Android ကိုအခမဲ့၊ အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်အခမဲ့ဖြစ်လာသည့်ငွေပေးချေသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အသုံးချပရိုဂရမ်များရွေးချယ်ခြင်း။
မည်သည့် Android ဖုန်းတွင်မဆိုသင်အကြိုက်ဆုံး Spotify သီချင်းဖြင့်နှိုးစက်တစ်ခုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Android ဖုန်းတိုင်းမှာပါ ၀ င်တဲ့ Galaxy S20 ရဲ့ထူးခြားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့က configure ကိုကူညီ။
Google Gboard အတွက်သင်၏စိတ်တိုင်းကျ Emojis ဖန်တီးရန်နည်းလမ်း ၂ ခု
ကျနော်တို့လက်တွေ့ကျသော Android ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာနှင့်အတူပြန်လာသည်။ သင်ကသင်စိတ်တိုင်းကျ Emojis ကို Gboard အတွက်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်း ၂ ခုကိုပြမယ်။
Nova Launcher Prime ကို ၀.၅၉ ယူရိုဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Nova Launcher Prime ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာကို ၀.၅၉ ဒေါ်လာဖြင့်သာရောင်းချသည်။
Samsung's ThemePark ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနည်း
Samsung ကဒီအက်ပလီကေးရှင်းသစ်ကိုစတင်လိုက်ပြီ။ သင် Galaxy လိုချင်သည့် Galaxy Mobile ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
Nova Launcher အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှု။ (ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်)
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်အတွက် Nova Launcher အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်ကိုငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီးပြန်လုပ် !!
တစ်သန်းမျှအခမဲ့ 4K Wallpapers များ !!
Wallpapers 4K ကိုသင်၏ Android terminal သို့အခမဲ့ download ရယူရန် application တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုသောဗွီဒီယို post ။
ယခုသင်သည်သင်၏ Android မိုဘိုင်းတွင် Pixel4၏« live » wallpapers ကို download လုပ်နိုင်သည်
Pixel4ကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းတင်ပြမည်ဖြစ်ရာယခုတွင် XDA developer မှ ကျေးဇူးတင်၍ ၎င်း၏ live wallpapers ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ပထမဆုံးအဆင့်များ၌ Galaxy Note10 + (နှင့်အခြား Galaxy) ဖြင့်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောချိန်ညှိချက်များအားလုံး
Samsung Galaxy Note 10+ ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ထားရန်သင်ပြင်ဆင်ရမည့် setting အားလုံးကိုသင့်အားပြသမည်။
ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်က Galaxy S and Note တွင်လက်စွပ်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်ဘက်ထရီညွှန်ပြချက်ထားရှိခြင်း
Galaxy S8, S9, S10, S10e, S10 +, Note 9, Note10, Note 10 5G နှင့် Note 10+ တွင်လက်စွပ်ဘက်ထရီညွှန်ပြရန်ရှိသည့်အက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခု။
မနက်ဖြန် Android 10 ရောက်ရှိရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်ဤအခမဲ့နောက်ခံပုံများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ဒီနောက်ခံပုံတွေဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက် Android 10 ကိုဖွင့်မည့်မနက်ဖြန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Hex Installer သည်သင်၏ Samsung Galaxy ၏ဆောင်ပုဒ်ကို One UI ဖြင့်ထူးခြားသည့်ပုံစံဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့် TV Box ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
သင်၏တီဗွီ Box ၏အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုခေတ်မီ။ အလုပ်လုပ်စေရန်ထိလွယ်ကူစေရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
Mario Bros, Sonic, Mortal Kombat နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သော retro ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၏ Live Wallpapers များကိုမည်သို့အခမဲ့ download ချရမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြသခဲ့သည်။
အံ့သြဖွယ်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းကြားစာများ။ Superfunctional !!
သော့ခတ်မြင်ကွင်းပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အသိပေးချက်များကိုစီမံရန်ဤအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသော application ဖြင့်သင်၏ Android ကိုလုပ်ပါ။
Huawei စမတ်ဖုန်းတွင် font ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
ဖုန်းပေါ်ရှိ EMUI အတွက် Theme Editor ကို အသုံးပြု၍ Huawei နှင့် Honor စမတ်ဖုန်းများတွင် font ကိုမည်သို့ပြောင်းနိုင်ကြောင်းလေ့လာပါ။
အရည်အသွေးမြင့်အခမဲ့ Wallpapers များကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်အက်ပ် ၃ ခုကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပြီးမျှဝေသောဗွီဒီယို။ သူတို့အားလုံးလုံးဝအခမဲ့။
Android အတွက်အခမဲ့လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် Android သတိပေးစနစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်စာသားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Galaxy S10 နှင့်သူတို့၏နောက်ခံပုံများသည်သူတို့၏အပေါက်များကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖုံးကွယ်ရန်အဆင်သင့်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Android အတွက်အခမဲ့ Wallpapers ကိုအခမဲ့ download လုပ်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသော Android အတွက် Live Wallpapers များကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ။ Android customization ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သင်မလွဲ can't နိုင်ပါ။ !!
Samsung သည် S10 ၏ screen တွင်းများအတွက် wallpapers ကိုကောင်းစွာစတင်လက်ခံရန်စတင်ခဲ့သည်
သင့်မှာ Galaxy S10 ရှိပြီးရှေ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့အပေါက်ကိုဖုံးကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ Samsung မှဒီနံရံလေးခုကအကောင်းဆုံးပါပဲ။
၂၄ နာရီသာလျှင်အခမဲ့ Launcher Black Luncher ကိုအခမဲ့ရယူပါ
Black Launcher ကို Google Play Store မှအလျင်မြန်ဆုံး၊ အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အသုံးအပြုဆုံး Launcher ကိုအခမဲ့ download ဆွဲပါ။ အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
မျက်နှာပြင်အပေါက်အားလုံးသည် Galaxy S10 နှင့် S10 + ၏နောက်ခံပုံများ
ကြီးမားသောတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုခွင့်ပြုသည့်ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိအပေါက်များကိုအာရုံစိုက်စေသော Galaxy S10 အတွက်ပျော်စရာနောက်ခံအားလုံးကိုအတူတကွထားကြသည်။
One UI Tuner ဖြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ status Pie၊ အမြန်ချိန်ညှိခြင်းများနှင့် Samsung Pie ဖြင့် Android Pie ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ
One UI Tuner ဖြင့်သင်၏ Samsung Galaxy ကို Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်။ XDA မှလာသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု။
မည်သည့် Android တွင်မဆို iOS12 Control Center ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း။
Android အတွက် Centrod နှင့် Control of iOS12 ကိုတုပရန်အကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုကကျွန်ုပ်အတွက်ဘာအကြံပေးလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။
iOS Control Center သို့ Android အမြန်ချိန်ညှိချက်များ
iOS ၏ Control Center သို့လျင်မြန်စွာချိန်ညှိချက်များအလွယ်တကူရရှိနိုင်စေရန်ကျွန်ုပ်သင်ကြားပေးသောဗွီဒီယိုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android အောက်ခြေတွင်ရှိသည်။
[APK] မည်သည့် Android တွင်မဆို Oneplus 6T ဖန်သားပြင်လက်ဗွေရာကိုသော့ဖွင့်ခြင်းကိုမည်သို့တုပရမည်နည်း
Oneplus 6T မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိလက်ဗွေသော့ဖွင့်ခြင်းကိုအတုယူရန်သင့်အားသင်ပေးသည်။ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်လုံခြုံရေးဆီသို့ဘယ်တော့မျှ ဦး တည်သည့် app တစ်ခု။
Gboard သည် temient အသစ် ၅၄ ခုကို gradient effect ဖြင့်ပေါင်းထည့်သည်
Android အတွက်ကီးဘုတ်အက်ပ်ဖြစ်သော Gboard သို့ထွက်လာသည့် gradient effect themes ၅၄ ခုအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Android ဖုန်းမှာ Gboard အသွင်အပြင်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
Android မှာ Gboard Keyboard ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ Android ဖုန်းတွင်ဂျီမေးလ်အသုံးပြုမှုကိုလွယ်ကူစွာစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းမှပိုထွက်ရန်ဤလှည့်ကွက်များကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်သော Emojis များကို Gboard ဖြင့်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။ ကီးဘုတ်အက်ပ်၏လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကိုရှာဖွေပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖန်တီးပါ။
WhatsApp status icon များသည်သတင်းစကားအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း
WhatsApp ရှိမက်ဆေ့ခ်ျအခြေအနေအိုင်ကွန်များ၏အဓိပ္ပါယ်။ လျှောက်လွှာထဲရှိမက်ဆေ့ခ်ျများပို့သောအခါပေါ်လာမည့်အိုင်ကွန်များဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ Android ကိုဟယ်လိုဝင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံး application များ
ဤဟယ်လိုဝင်း ၂၀၁၈ ကိုသင်၏ Android ဖုန်းကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာများ၊ အခင်းအကျင်းများ၊
Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံး application များ
Android ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံး application ငါးခု။ သင့်ဖုန်းပေါ်ရှိရှုထောင့်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်ဤအပလီကေးရှင်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Apps ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အတွက် WhatsApp အတွက် Mods 3
WhatsApp ၏အသုံးပြုမှုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်သင် download လုပ်နိုင်သော mods သုံးခုကိုရှာဖွေပါ။ သူတို့ရဲ့ interface ကိုပြောင်းပြီးသူတို့နဲ့ထပ်ဆောင်းအင်္ဂါရပ်တွေရတယ်။
Android တွင်အိုင်ကွန်များပြောင်းရန်နည်းလမ်း ၂ ခု
Android Oreo ပါသော terminal နှင့်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် Samsung ကနောက်ဆုံးသတင်းကနောက်ဆုံးပေါ် update သည် message များ၏အသံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
Memoji က Samsung ရဲ့ AR Emoji ကို Apple ရဲ့အဖြေပဲ
Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည် Memoji ဟုခေါ်သောအင်္ဂါရပ်အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ Galaxy S9 မှ AR Emojis မှကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာကိုမှုတ်သွင်းထားသောစိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်စနစ်ဖြင့်ရှင်းလင်းစွာမှုတ်သွင်းထားသော Memoji ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ROOT မလိုပဲမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ Android ခလုတ်များကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။ [Android 7.0+]
ကျွန်ုပ်သည်သင့်အား Android အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခမဲ့ application တစ်ခုကိုပြသထားသောဗွီဒီယိုအကြံပေးချက်သည်သင့်အား rooted terminal မလိုဘဲ screen ပေါ်ရှိ Android ခလုတ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်စေသည်။
Deutsche-Telekom သည်စမတ်ဖုန်းများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းကိုရပ်တန့်တော့မည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများအတွက် bloatware ၏အဆုံးအမှတ်အသားသောဂျာမန်အော်ပရေတာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
လက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ Xiaomi Mi A1 terminal ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမယ်၊ ဘယ်လို install လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကို Android သုံးစွဲသူတွေရဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်အကြောင်းအရာများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောဒီခရစ်စမတ်အခင်းအကျင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
iPhone X ၏“ Animojis” ၏ Emojis သည် Android အတွက်လည်းဖြစ်သည်
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့် Android မှ iPhone X emojis ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ Animojis ဟုခေါ်သည့် iPhone X သည်ယခုအခါ Android အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
SwiftKey ကိုအခင်းအကျင်းအသစ်များ၊ ဘာသာစကားများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်အခြားသတင်းအသစ်များဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည်
Android နှင့် iOS SwiftKey အတွက်လူကြိုက်များသောကီးဘုတ်အက်ပလီကေးရှင်းသည်အသစ်သောအကြောင်းအရာများ၊ ဘာသာစကားအသစ်များနှင့်ပိုမိုသောအရာများကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့်အသစ်သော update ကိုရရှိသည်
Action Launcher မှ Lollipop မှလိုက်လျောညီထွေရှိသည့် icon များကိုထောက်ခံမှုပေးသည်
Action Launcher application launcher ကို update လုပ်ပြီး Android Lollipop မှ terminals အားလုံးတွင် Android Oreo ၏ adaptive icon များကိုခွင့်ပြုသည်။
ဤ Premium Icon Packs များကို Android အတွက်အခမဲ့၊ အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် download လုပ်ပါ
သင်၏ Android ကိုလုံးဝစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်စေရန် icon pack တစ်ခုပါဝင်သည်
သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည့် 3D ပုံနှိပ်စက် Contour
Slickwraps က 3D ပုံနှိပ်စက် Contour ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင်ဗီနိုင်း "အသားအရေ" ကိုပုံနှိပ်ပေးသည်။
Nova Launcher က shortcut အသစ်တွေထပ်ထည့်လိုက်ပြီးသင့်ရဲ့ device ကို customize လုပ်နိုင်ပါတယ်
Nova Launcher နှင့် Sesame Shortcuts များနှင့် Android 7.1 Nougat Shortcuts များကို Android 5.0 သို့တိုးချဲ့လိမ့်မည်
ယခင်ကပေးခဲ့သည့်အခမဲ့အိုင်ကွန် ၃ ခု။ သူတို့ကို download လုပ်ရန်ပြေး, ကမ်းလှမ်းမှုကျော်ဖြစ်ပါတယ် !!
ဤပို့စ်တွင်သင်ယခင်ကပေးခဲ့ဖူးပြီး Play Store တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းရသောအခမဲ့အိုင်ကွန်အထုပ် (၃) ခုကိုကျွန်ုပ်ထံပို့ဆောင်ပေးသည်။
Touchwiz အပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့၏ Launcher ၏ icon များကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည့်အခမဲ့ application ကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်သင်သည်။
Android O ဖြင့်မင်းမှာ emoji ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေအမြဲရှိနေမှာပါ
Android O သည် developer တစ်ခုချင်းစီအား ၄ င်းတို့၏ application များသို့ ၄ င်းတို့ရရှိစေရန်ထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည့် emoji စာကြည့်တိုက်ကိုထောက်ပံ့လိမ့်မည်
ဒီဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာအသစ်မှာမင်းရဲ့ Android terminal ကိုအပြည့်အ ၀ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပါမယ်။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာမှာသင်၏လူမှုကွန်ယက်များတွင်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံစံပေါ်လာစေရန်သင်၏ nick ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာကိုပြသည်။
Galaxy S8 တွင်အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်းကြားစာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နည်း
Galaxy S8 နှင့် S8 Plus နှင့်အတူ Samsung သည်သုံးစွဲသူများအား application-specific notification ၏အပြုအမူများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးသည်
Samsung Galaxy S8 ရှိ Always On Display ကိုမည်သို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရမည်နည်း
Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့၏ Always On Display ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီးသင်၏ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
Samsung ၏ Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တွင်အသံပရိုဖိုင်းကိုသင်လိုချင်သောအသံအတွေ့အကြုံနှင့်ချိန်ညှိရန်ရွေးချယ်စရာများစွာပါဝင်သည်
ဤနေရာတွင်သင့်အား Telegram အတွက်အကောင်းဆုံးသောခေါင်းစဉ်များ၊ အမြောက်အများနှင့်အမျိုးမျိုးသောပမာဏများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့ယူဆောင်လာပြီးထူးဆန်းသည့်အရာများကိုဒေါင်းလုတ်မပါဘဲယူဆောင်လာသည်။
Custom Quick ချိန်ညှိချက်များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းသည် Toogles အသစ်ကို Android အသိပေးခြင်းကုလားကာထဲသို့ထည့်ရန်
Custom Quick Settings သည် Android 5.0 နှင့် + သက်တမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏အသိပေးချက်ကုလားကာအတွင်း toogles အသစ်များဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည့် app တစ်ခုဖြစ်သည်။
Android အတွက် Gboard သည် Google Translate၊ emoji အကြံပြုချက်များနှင့်အခြားအရာများကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်
Android အတွက် GBoard update အသစ်တွင် Google Translate၊ သနားခြင်းကရုဏာစိတ်များ၊ အသံဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များနှင့်အသံဖြင့်အသုံးပြုမှုအသစ်များအတွက်အထောက်အပံ့ပါဝင်သည်
အခွင့်ကောင်းယူသည်!! ဤအရာများအားလုံးသည် Android အတွက်ယခုအခမဲ့ဖြစ်သည်
ယခုသင်ဤ Android အခမဲ့ပရိုဂရမ်များကို icon pack ဖြစ်သောအခမဲ့ application များစာရင်းဖြင့်သင်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Android တွင်သီးသန့်ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီး Desktop Version ပြီးနောက်စိတ်ကြိုက် themes များဖြစ်သည်။
WhatsApp သည် Android 7.1 မှ emojis အသစ်များကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်
မည်သည့် Android ဗားရှင်းဖြစ်ပါစေ WhatsApp ၏ beta version မှယခု emojis အသစ်ပမာဏအသစ်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
Swype Keyboard Update အသစ်သည် Emoji ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်နိုင်သည်
Swype Keyboard သည်လက်ဟန်အမူအရာရိုက်နှိပ်ခြင်း၏ရှေ့ပြေးအရာဖြစ်ပြီးယခုတွင်၎င်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည်။
သင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောကီးဘုတ်လိုချင်ပါက SwiftKey သည်အခကြေးငွေပေးသောအခင်းအကျင်းအားလုံးကိုအခမဲ့အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ဤကိစ္စတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Google Allo သည်အခြေအနေပေါ် အခြေခံ၍ emojis ကိုခန့်မှန်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြင့် update လုပ်သည်
သင်ဂူဂဲလ် Allo တွင်သတင်းစကားတစ်ခုရေးသောအခါသင်စာရိုက်သည့်အတိုင်း emoji ကိုရွေးချယ်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းအတွက် "Smart Smiley" ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ icon တွေကသင့်ကို Android launcher နဲ့အတူ icon pack ကိုသုံးဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်
အကယ်၍ သင်၏ပုံမှန် launcher, သင်၏ Android စမတ်ဖုန်း၏စိတ်ကြိုက်အလွှာသည်သင့်အား icon packs များကိုတင်ရန်ခွင့်မပြုပါက Awesome icon များသည်အဖြေဖြစ်သည်။
Android Taskbar ကို Root မရှိရင်ဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဟာ Android taskbar ကို Root မသုံးပဲစိတ်ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နိုင်သလိုရှုပ်ထွေးတဲ့ flashing tutorial တွေကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပြပါမယ်
သင့် status bar တွင် Pure Android Material Design ၏အရောင်များနှင့်အိုင်ကွန်များကိုပေးပါ
Status ဆိုသည်မှာ app တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်အသုံးပြုနေသော app နှင့် icon များ၊ အသိပေးချက်များနှင့်အရောင်တူသည့် Android status bar ကိုပေးသည်
သင်လက်လွတ်မသွားနိုင်သောခေတ်မီ။ အခမဲ့နှင့်ထူးခြားသောအိုင်ကွန် ၅ လုံးရှိသည်
သင်၏စမတ်ဖုန်း desktop ကိုအခမဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ရန်သင်မမေ့နိုင်သောထူးခြားဆန်းသစ်သောခေတ်မီ icon packs ၅ ခု
အသစ်သောအဟောင်းနှင့်အဟောင်းများကို emojis များစွာသည်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုကိုရရှိသည်
ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် Unicode 72 ကို Android သို့တင်ပို့မည့် Emojis 9.0 သစ်
ယူနီကုဒ် ၉.၀ သည် emojis အသစ် ၇၂ ခုကိုပေါင်းစည်းထားပြီး၎င်းသည် paella, facepalm, kiwi, gorilla နှင့် Android N တွင်တွေ့ရမည့်များစွာသောအရာများပါဝင်သည်။
Chrooma Keyboard နောက်ဆုံးဗားရှင်း 3.0 Gestures, Themes, Google Now Integration နှင့်အခြားအရာများဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်
Chrooma Keyboard 3.0 သည်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်အတူအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ကီးဘုတ်အက်ပလီကေးရှင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်စေသည်။
သင်၏စာတိုပို့ခြင်းနှင့်ကီးဘုတ်အက်ပ်များတွင် Emoticons နှင့် GIF များပါရှိသည့် Dango ဖြစ်သည်
Dango သည် animated GIFs နှင့် emojis များပါ ၀ င်ရန်သင်၏ keyboard နှင့် messaging app များအတွက် "Add-on" အနေဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Facebook Messenger သည်လူမျိုးနှင့်ကျားမကွဲပြားမှုကွဲပြားမှုရှိသည့် Emojis အသစ်များစွာကိုလက်ခံရရှိသည်
Facebook Messenger ဖြည့်စွက်ပေးသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောသူများထဲတွင်လူမျိုးနှင့်ကျားမကွဲပြားမှုကွဲပြားသည်။ စုစုပေါင်း emoticons ၁၅၀၀ ကျော်ရှိသည်
ဂူဂဲလ်ကင်မရာကို ၃၂.၂ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဗွီဒီယို mode မှာ icon အသစ်များနှင့်ပုံရိပ်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ
Google Camera update ကိုအနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသော interface နှင့် Nexus ထုတ်ကုန်များသို့သာလာပြီး video mode တွင်ဖမ်းယူသည်
Books, Movies or Music စသည့်ဂူဂဲလ်ပလေး၏အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သောဂူဂဲလ်သည်အိုင်ကွန်တစ်ခုချင်းစီ၏ဒီဇိုင်းကိုအခြားသူများအကြားအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။
Google Now Launcher ကို landscape mode နှင့်ပုံမှန် app icon အရွယ်အစားဖြင့် update လုပ်သည်
Google Now Launcher တွင်သင်ယခုအခင်းအကျင်း mode ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့မှသာတက်ဘလက်သို့မဟုတ် phablet နှင့်အတူမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို၎င်း၏ဖန်သားပြင်ကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်
WhatsApp အတွက်ခရစ်စမတ်၏ emoticon download message ကိုသတိပြုပါ၊
Skype နှင့် Facebook Messenger တို့ကိုခရစ်စမတ်အကြောင်းအရာများဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
Skype နှင့် Facebook Messenger တို့သည်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုခရစ္စမတ်အခမ်းအနားများနှင့်အခြားနေ့စွဲများနှင့်အတူနောက်ဆုံးရသတင်းများရရှိပြီးဖြစ်သည်။
အသစ်ပြောင်းခြင်း၊ Pinying ထပ်တိုးခြင်း၊ စာရိုက်ခြင်းတိုးတက်မှုများနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော emoji interface အသစ်ထည့်သွင်းထားသော SwiftKey အသစ်ပြောင်းလဲမှု
Google က Nexus ထုတ်ကုန်များသည် emojis အသစ်များသို့မဟုတ် emoticons ဟုလူသိများသောလာမည့်နေ့ရက်များမကြာမီလာမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Snapchat သည် Lens Store ကိုစတင်ပြီးသင်၏ selfies ကို ၀.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချသည်
Snapchat သည် Lens Store ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏ app app သုံးစွဲသူများသည်သူတို့လိုချင်သမျှကာလပတ်လုံးထိုမှန်ဘီလူးများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်
Android သတိပေး !! "WhatsApp ၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်များသည်မည်မျှအလွန်အေးမြပါသနည်း" ဟူသောသတင်းစကားကိုသတိပြုပါ
သတင်းစကားကိုသတိပြုပါ WhatsApp ရုပ်ပုံများအသစ်သည် malware များမည်မျှအေးမြသနည်း။
အယူမှားဟယ်လိုဝင်းပါတီပွဲမှာမင်းရဲ့ Android ကိရိယာအတွက်အကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။
သင်၏ Samsung Galaxy ကို themes အသစ် ၅၇ ခုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ
သင်၏စမတ်ဖုန်းအသစ် ၅၇ ခုကို Samsung ၏စတိုးဆိုင်ထဲသို့ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ Samsung Galaxy ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ။
[APK] Nova Launcher ၏မူကွဲအသစ်ကိုယခုအခါ icon ပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
Nova Launcher ကကျွန်တော်တို့ကို app drawer ၏ဒီဇိုင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အရွယ်အစားကိုပုံမှန်ဖြစ်စေပြီးလိုက်နာရန်စည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာသည်။
Nova Launcher သည်ကိုက်ညီရန် icon များကိုအရွယ်အစားပြောင်းရန် update ပြုလုပ်သည်
အကယ်၍ တစ်ခုခုက Android ကိုထူးခြားစေတယ်ဆိုရင်၎င်းသည်သူစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းသော operating system ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကွဲပြားသောအထုပ်များမှအိုင်ကွန်များပေါင်းစပ်ရန်ကူညီသော Icondy application တစ်ခု
Icondy သည်ကျွန်ုပ်တို့ Android ဖုန်းကိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းစနစ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပေါင်းစည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ကိစ္စများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်နှင့်အတူ Google Play မှကဏ္ Play တစ်ခုတွင် Google ကလုပ်လိမ့်မည်။
Selfied for Messenger သည် Messenger အတွက် Facebook အက်ပလီကေးရှင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာနှင့်အတူမိမိကိုယ်ပိုင်စမတ်ဖုန်းဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသဖြင့်အာရုံခံစားမှုဖြစ်စေသည်။
ရှက်စရာဒိုင်နိုဆောများနှင့်ဂူဂဲလ် Hangouts ၏လျှို့ဝှက် Emoticons အကြားအရောင် ponies
Icon စတိုး, Android အတွက်အိုင်ကွန်စတိုး
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Android အတွက် Store သို့မဟုတ် icon store ကို Android အတွက်ပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်ညှိရန်ပရိတ်သတ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုကိုပေးသည်
Now Gesture Tweaks - Google Now ပွတ်ဆွဲခြင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် application တစ်ခု
ဂူဂဲလ်ပလေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုရှာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်စေမည်ဟုကတိပေးသည်။ ယခု Gesture Tweaks ကသင့်အား Google Now ပွတ်ဆွဲခြင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးသည်
ဤအရာသည် WhatsApp အသံခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ်အခြားအတုတစ်ခုလော။
Dodol pop, ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏တန်ချိန်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့အားလုံးအကြိုက်ဆုံးအရာတစ်ခုထဲကတစ်ခုက Dodol ပေါ့။
စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများ၊ အခင်းအကျင်းအသစ်များနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များရှိသည့် Swiftkey ဗားရှင်းအသစ်
Swiftkey ဗားရှင်းအသစ်သည်အကြောင်းအရာအသစ်များနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များကို ၃၃% ဖြင့်ယူဆောင်ခြင်းအပြင်၎င်းသည် app ၏အထွေထွေစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
Android KitKat တွင် iOS7emojis ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
Emoticons တွေဟာအရင်ကမရှိခဲ့ဖူးတဲ့ messenger အချိန်ကတည်းကငါတို့စကားဝိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
Unicode 7.0 သည်လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းနှင့်အတူ Emojis အသစ် ၂၅၀ ကိုယူဆောင်လာမည်
Emojis အသစ် ၂၅၀ သည်ထင်ရှားသောအလယ်လက်ချောင်း emoji အပါအဝင် Unicode 250 ဗားရှင်းအသစ်ဖြင့်ပေါ်လာလိမ့်မည်
Play Store တွင် CyanogendMod သည်စာလုံးအသစ်ခြောက်လုံးကိုဖွင့်သည်
CyanogendMod သည်၎င်း၏ ROM အသုံးပြုသူများကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဖောင့်အသစ် ၆ ခုကိုစတင်ခဲ့သည်
ဗားရှင်းအသစ်ဖြင့် Hangouts တွင်သင်ဖုန်းမြည်သံနှင့်သတိပေးချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်
SoftKeyZ Root ကိုသုံးပြီး Android Icon တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows ကို Mac menu နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ချင်သည်နည်းတူလူအများစုက၎င်းတို့သည် navigation bar icon များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ချင်ကြသည်။ ၎င်းသည် SoftKeyZ Root အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်ယခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို Play Store တွင်ယူရို ၂ ဖြင့်ရနိုင်သည်။ အချို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာ၎င်းသည်အမြစ်တွယ်နေသော Terminal များနှင့်သာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Giganticon ဖြင့် Android အိုင်ကွန်များကိုအရွယ်အစားပြောင်းနည်း
Giganticon ဖြင့် icon များကိုအရွယ်အစားပြောင်းနည်း
ဤနေရာတွင် LG G16 အတွက်အခင်းအကျင်း ၁၆ ခုကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ရန် APK format ဖြင့်အခမဲ့ download လုပ်ရန်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်တစ်ခုရှိသည်။
[APK] Identiconizer (သို့) သင်၏အဆက်အသွယ်များ၏ဓါတ်ပုံများကိုမူလအိုင်ကွန်များအတွက်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ
ဒီနေ့မှာမင်းကိုအခမဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်လျှောက်လွှာတင်ပေးချင်တယ်။ မင်းကမင်းရဲ့အဆက်အသွယ်တွေရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို Android မှာပြောင်းလဲနိုင်ပြီးမူလထိတွေ့မှုကိုပေးပါလိမ့်မယ်။
Android အတွက် Tumblr သည်သင့်ဘလော့ဂ်၏အဓိကအကြောင်းအရာကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်
Android အတွက် Tumblr သည်သင့်ဘလော့ဂ်၏သွင်ပြင်ကိုသင်လိုချင်သောအတိုင်းပြုပြင်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် update ကိုရရှိသည်။
သင်၏ WhatsApp တွင်ပရီမီယံအသစ်များကိုအခမဲ့ထည့်သွင်းပါ
ဒီနေ့မှာမင်းကိုအခမဲ့ WhatsApp မှာအခမဲ့ပရီမီယံ emoticons တွေသုံးခွင့်ပေးမယ့်အခမဲ့ application ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။
Android မှာအကောင်းဆုံး icon packs ၇ ခု
Android မှာ icon packs တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ခုနစျခုကတော့တစ်ခုကသင့် device ကိုအလိုအလျောက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Themer Beta တွင်ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူ Icon Pack အထောက်အပံ့
Themer ထဲရှိ Icon pack ကိုသင်၏ Android ဖုန်းအားမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြည့်နိုင်သော MyColorScreen application ၏နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Android သုံးစွဲသူများစွာသည် OS ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ Wallpapers ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့် App များဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားသည်။
Fleksy keyboard ကိုဗားရှင်း ၂.၀ သို့အသစ်အသစ်သောအကြောင်းအရာများဖြင့် update လုပ်ပြီး Cloud မှစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သည်
သင်၏ခလုတ်သည်သင့်ကိုလက်မခံပါက Fleksy ကီးဘုတ်သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အခြားနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏ Android ဖန်သားပြင်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ (အသစ်များအတွက်သင်ခန်းစာ)
သင့်ရဲ့စက်ကိုနည်းနည်းလေးပိုပြီးစနစ်တကျထားချင်တယ်ဆိုရင် Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်မှာယူခြင်းအတွက်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းအသစ်ကိုလက်လွတ်မခံသင့်ဘူး။
သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန် Icon Packs
သင်၏ Google စမတ်ဖုန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖော်မြူလာများရှာဖွေနေသည့် Google Play မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ Android စမတ်ဖုန်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် icon ၃ ခုတင်ဆောင်ထားသည်။
Samsung သည် TouchWiz ၏ icon သစ်များဖြင့် Galaxy S5 ၏အလားအလာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်
TouchWiz icon အသစ်တွေကအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပြပြီး Samsung Galaxy S5 အသစ်ကိုမိတ်ဆက်တော့မှာပါ။
SwiftKey သည် Emoji ပါသော beta ဗားရှင်းအသစ်နှင့်ဂဏန်းထိပ်တန်းကိုထည့်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်
Android 4.4 ရှိအသိပေးချက်ဘားတွင်အိုင်ကွန်အလွတ်များပေါ်လာခြင်း
Android 4.4 ရှိအလွတ်ပုံသဏ္iconsာန်များသည်ယခင်ဗားရှင်းများနှင့်အရောင်ပြောင်းရန်အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိသည်။
သင့်ရဲ့ Android ကို Xposed Framework နဲ့အမြင့်ဆုံးဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
မည်သည့်ဖိုင်မဆို flash ပြုလုပ်စရာမလိုဘဲသင်၏ Android ကို Xposed Framework နှင့်အပြည့်အဝယူပါ။ CM သို့မဟုတ် AOKP အင်္ဂါရပ်များကိုသင်၏ ROM STOCK တွင်ထားပါ။
Custom ROM နှင့် Root ဆိုတာဘာလဲ။
ထုံးစံအရ ROM များသည်ဗဟုသုတနှင့်ဗဟုသုတရှိသူများကိုအထူးတပ်ဆင်ထားသည်။
KitKat 4.4 icon များကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်
စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် Android KitKat 4.4 ၏ပုံရိပ်ကိုသင်မြင်သောအတိုင်းဖြန့်ချိခဲ့သည်။
သင်၏ Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်အခမဲ့အိုင်ကွန်အစီအစဉ်များ
သင်၏ Android terminal ကိုကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အခမဲ့ icon packs
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား Sony Xperia U တွင် statusbar နှင့် AOSP settings menu ကိုထည့်သွင်းရန် Mod တစ်ခုယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းလ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်။
ယနေ့တွင်သင့်အား Sony Xperia P အတွက် Mod Pack တစ်ခုယူဆောင်လာပြီး Sony Xperia Z ၏ပုံသဏ္giveာန်နှင့်အသုံးချမှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုပြသနိုင်သည်။ လာစမ်းပါ။
Xperia 2012 အတွက် Cyber-shot Mod
၂၀၁၂ ခုနှစ်၏ Xperia ကင်မရာအတွက် Cyber-shot Mod ကိုထည့်သွင်းရန်သင်ခန်းစာ။ ဤ Mod သည်ဓာတ်ပုံများတွင် HDR mode ကဲ့သို့သောကင်မရာအတွက် extensions အသစ်များကိုယူဆောင်လာသည်။
Samsung Galaxy S အတွက် Linaro နှင့်အတူ Rom ICS F4k MOD v4.0.4 r4 IMM76I
F4K ကကျွန်တော်တို့ကို Samsung Galaxy S အတွက်ပထမ ဦး ဆုံး Rom ကို Linaro code တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။
သင်၏ Android မိုဘိုင်းကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
HeLauncher သည်သင့်မိုဘိုင်း Android ဖုန်း၏ပင်မမျက်နှာပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာပြင် ၁၀ ခုရှိသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။